Mozilla waxay kansashay Firefox 64 Bits oo loogu talagalay Windows | Laga soo bilaabo Linux
Mozilla waxay kansashay Firefox 64 Bits oo loogu talagalay Windows
@Jlcmux | | Aplicaciones, GNU / Linux, Noticias
Taasi waa sax, Mozilla ayaa kaliya ku dhawaaqday inay joojinayaan taageerada Firefox illaa 64bits oo loogu talagalay Windows. Tani waxay u egtahay mid la yaab leh oo ka soo horjeedda iyada oo la tixgelinayo in nidaamyada hadda jira ay u adeegsadaan 64bits sababo waxqabad.
Tani waxay dharbaaxo jaban ku tahay dadka isticmaala Windows-ka, laakiin si cad ayey u tahay war weyn dadka isticmaala Linux. Maaddaama ay jirto doorbid cad oo ku wajahan nidaamyada il furan ..
Mozilla waxay liis garaynaysaa sababaha ay u go'aansatay inay tan sameyso:
Waxyaabo badan oo Plugins ah looma heli karo 64bits
Plugins-yada la heli karo si sax ah uma shaqeynayaan.
Khaladaadka ay soo tabiyaan dadka isticmaala 64bit ma laha mudnaan maxaa yeelay waxaan ka shaqeyneynaa waxyaabo kale.
Niyad jab u ah dadka isticmaala 64bit maxaa yeelay waxay dareemayaan (oo ay yihiin) asalka.
Intaa waxaa sii dheer, Mozilla waxay u mahadcelineysaa dhammaan kooxihii iskaashiga la sameeyay mashruuca.
“Waad ku mahadsan tihiin qof kasta oo ka qayb qaatay mawduucan. Marka la eego macluumaadka jira, waxaan go'aansaday in aan ku sii wado naafanimada daaqadaha 64-bit habeenki iyo saacad kasta oo la dhiso. Fadlan aan ka fiirsanno in dooddan ay xiran tahay haddii aysan jirin macluumaad cusub oo muhiim ah oo u baahan in la soo bandhigo. »
Oo hadda taas?
Wanaagsan Waxay noqotay Mozilla mashruuc kale oo la yiraahdo Biyaha biyaha. Browser ku saleysan Mozilla Firefox oo kaliya taageera Windows iyo gaar 64bits.
Waterfox waa biraawsar hawleed sare oo ku saleysan koodhka ilaha Mozilla Firefox. Waterfox wuxuu si gaar ah loogu talagalay nidaamyada 64-bit, iyadoo hal shay lagu hayo: xawaaraha.
Fikradayda shaqsiyadeed ayaa ah in tan loo sameeyay iyada oo ujeedadu tahay kala tag Mozilla Firefox y Watercam u dhexeeya Linux iyo Windows. Waxaan sidaa u iri sababtoo ah sanadaha qaar badankood (hadaanay wada ahayn) kombiyuutarada waxay ku shaqeyn doonaan 64bits ... Oo hadaan ahay isticmaale Windows waxaan isticmaali doonaa Waterfox iyo hadii aan ahay isticmaale Linux ah waxaan isticmaali doonaa Mozilla Firefox.
Sidee tahay? Maxaad u malaynaysaa inay dhici doonaan?
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Mozilla waxay kansashay Firefox 64 Bits oo loogu talagalay Windows
34 faallooyin, ka tag taada
Waxaan u arkaa wax la yaab leh. Waxay umuuqataa inay doonayaan inay u kala saaraan Firefox labo mashruuc, laakiin maxay u rabaan inay sidaa yeelaan ???
Ku jawaab hexborg
Ka waran haddii ay bilaabayaan iibinta Waterfox si ay taageero u helaan? : ALIENS:
Haa. Waxay noqon kartaa sharaxaad macquul ah. In kasta oo, sida Pavloco hoos ku sheegay, uma eka inay tahay mashruuc Mozilla. Taabadalkeed, waxay umuuqataa fargeeto ay sameeyeen dad aan jeclayn taageerada xun ee uu Firefox ku haysto daaqadaha 64-bit. Macluumaad dheeraad ah ayaa halkan ku yaal: http://www.neoteo.com/waterfox-firefox-alternativo-de-64-bits boostadaasna waxay ku dhowdahay sanad, marka tan ma ahan tan hadda.
Aniguba waan la wadaagayaa isku xidhka
http://www.mozilla.org/projects/powered-by.html - Halkaas mashruuca Waterfox ayaa ka soo baxa.
Waxaa jira mashruucyo softiweer ah oo si uun u adeegsada lambarka Mozilla, macnaheedu maahan inay iyagu wadaan Mozilla.
Waterfox, sida ay horeyba u yiraahdeen, waa fargeeto Firefox ah oo si hufan u rabta inay ka kabato la'aanta nooca rasmiga ah ee 64-bit ee Firefox ee Windows.
Waa koodhka Mozilla Firefox, laakiin mashruuca kama tirsana Mozilla
Runtu waxay tahay in ilama muuqato aniga sida ugu fiican ee fikradaha, maaddaama ay yihiin kuwa doonaya inay bilaabaan inay yeeshaan suuq ballaaran ... Waxaan ula jeedaa, iyagu aad ayey u fiican yihiin laakin waxay rabaan inay ka sarreeyaan, sida iska cad waxay doonayaan inay tartamaan , oo u kala sooc mashaariicdooda laba badeecadood oo kala duwan oo ay sameeyaan Isla shay, markaa, aniga ilama muuqato mid ku habboon aniga, inbadan oo maanta ka yar, in aysan raadinaynin inay kala soocdo nidaamyada bilaashka ah ee milkiileyaasha laakiin ay tahay u janjeersiga is dhexgalka…
Kama fiirinayo indhaha ugu fiican ee ay tahay inaan qirto
Waxay la mid tahay kiiska eMule oo sidan oo kale loogu yeedho nooca Windows iyo aMule oo loogu talagalay noocyada Linux iyo Mac ……… laakiin iyagu waa isku barnaamij.
eMule waxaa loogu talagalay Windows, aMule waxaa loogu talagalay Windows, Linux iyo Mac, way ka duwan yihiin laakiin waa barnaamijyo isku mid ah.
Dhanka kale, waxaan rabay inaan dhaho muhiimad siinta tan iyo iskutallaabta Mozilla waxay iila muuqataa "doqonimo" aniga, maaddaama codsiyada 64-bit ay cunaan RAM badan una adeegaan inay ka faa'iideystaan ​​in ka badan 3GB, oo biraawsarka ku cuna wax ka badan 3GB RAM? Sidoo kale, nooca 32-bit wuxuu si fiican ugu shaqeeyaa 64-bit Windows waana wax qofka caadiga ah ee isticmaala uu daryeelo 3 kuumin.
Google Chrome sidoo kale ma laha nooc 64-bit u ah Windows kumana aanan arag qaylo-dhaankan meel uun. Aynu joojino khiyaamada oo aan wajahno, Firefox waxay sii wadi doontaa inay si isku mid ah ula shaqeyso nooca 32-bit ee Windows 32-bit iyo Windows 64 labadaba dhibaato la'aan.
Sida Nano oo kale, waxaan u maleynayaa inaysan aheyn fikrad wanaagsan marka laga reebo shaqo ka joojinta ay taasi muujineyso
Isdhexgalka iyo isdhexgalka softiweerka si loogu adeegsado aalado kala duwan waxaan u maleynayaa inay tahay fikrad fiican, maadaama aad meel walba joogto oo tanina ay ku siineyso meeleyn wanaagsan (haddii loo maleeyo inay ahayd aragtida dadka ku nool Mozilla).
Ahaanshaha wax yar oo feker xun, miyaanay taasi ahayn hab lagu siiyo Microsoft dharbaaxo yar adigoo kaga tagaya Windows 8 shaqooyinka gaarka ah ee birta ee Microsoft?
Waa maxay aragti wanaagsan ... Waa inaad ka shaqeysaa Taariikhda iyo mowduuca cirbixiyeennadii hore .. hehe
Taasi waa mid xiiso leh, laga yaabee inay haa tahay. Malaha way ka xumaadeen.
Firefox waligeed kamay mid noqonin daalacashada aan ugu jecelahay, waxaan u maleynayaa in wax waliba ay ahaayeen qorshe xariifnimo ah, ka tag mashruuc iyo lacag kale, markaan lahaa daaqado 64-bit ah, waxay ku dhacday fiidiyowyada YouTube-ka, markii la ordayo ama la soo dejinayo, waligood waligood iyagu si fiican ayey isugu dhafanaayeen, waxaan u maleynayaa inay jiraan waxyaabo kale oo ka wanaagsan linux. Farxad
Ka jawaab soo dejinta
Beddelka ka fiican Firefox Ma jiro aniga, Linux ama Windows ama Mac OS X midna. Browserkan, oo leh kor u kac iyo hoos u dhac, ayaa la caddeeyay inuu yahay kan ugu fiican uguna dhammaystiran, labadaba adeegsadaha ugu dambeeya iyo kuwa horumariyaba. Dhammaan kuwa aan isku dayay, waa midka sida ugu wanaagsan u turjumaya degellada, noocyada, iyo midka ugu badan ee waafaqsan heerarka. Laakiin dabcan, taasi waa ra’yigeyga.
Waxaan u maleynayaa isku mid. Midka ugu dhow ayaa laga yaabaa inuu yahay Chromium, laakiin khibradeyda shaqsiyadeed waan ka gaabiyaa marka loo eego Firefox.
Dhab ahaan, runtii, aniga ahaan, midna. Runtu ma aha Chrome, Opera, ama Chromium midkoodna, in kasta oo ay kan dambe taageerto.
Uma arko wax qalad ah Mozilla Foundation inay go'aansato inay ka qaado dadka isticmaala Windows adeegsigooda biraawsarkooda (haddii taasi fikrad tahay). Dabcan waxay leedahay faa'iidooyinkeeda iyo khasaaraheeda, laakiin haddii aan tixgelinno sahamiyahaas wuxuu ka tagayaa waxyaabo badan oo la doonayo iyo inay weel malab ah u tahay xayawaanka waxyeellada u leh shabakadda, maxaa yeelay dadka isticmaala Windows waxay leeyihiin fursado badan oo ay tixgeliyaan.
Firefox waa hadii aysan aheyn midka ugufiican bog fureyaasha ugu fiican awooddeeda marin iyo horumarin waa fasalka koowaad.
Ufiican Linux !! Si tartiib tartiib tartiib tartiib ah, by waxaan ku mashquulsan nahay meeshii aan uqalmin.
Waxaan u maleynayaa in Waterfox aysan aheyn mashruuc Mozilla. Xaqiiqdii waxaan u maleynayaa inay ku xad gudbeyso liisanka Firefox, maadaama aanan heli karin koodhka ilaha.
Halkaas ayuu mashruucu ka soo baxayaa.
Iga raali noqo waan fahmay taas kaliya daaqadaha 64 jajab? iyo kuwan 32 xabbo leh? mise waxay u tahay daaqadaha guud ahaan.
Ku jawaab mfcollf77
Kaliya loogu talagalay Windows 64bits
Waxaan ku qanacsanahay in Linux ay ku guuleysan doonto desktop dhowr sano kadib. Xalalka daruuraha ayaa si tartiib tartiib ah uga takhalusi doona xadka u dhexeeya Linux iyo Windows, marka la eego barnaamijka softiweerka, si markaa aysan muhiim ugu noqon doonin in lagu doorto "xoog" Windows OS maxaa yeelay codsiga aad u baahan tahay waxaa loogu talagalay oo keliya barxaddaas
Ku jawaab Tragk
Waxaan aaminsanahay in websaydhka iyo codsiyada daruurtu ay waxbadan ka caawin doonaan Linux
Aragtidayda, inkasta oo ay u muuqato mid duugoobay, waxay tahay inay qaadayaan tallaabada ugu horreysa ee lagu baabi'inayo Firefox oo ay bilaabayaan inay suuq ku helaan biyofox, markii hore daaqadaha 64-bit ka dibna nidaamyada kale ee 64-bit, Linux iyo mac, tartiib-tartiib ah 32 nidaamyada -bitka dhinac.
Sikastaba ma isticmaalo daaqadaha marka runtu aniga ima taabaneyso, laakiin hadii aakhirka isbadalkan waxtar u leeyahay dhamaan dadka isticmaala Linux, ka dib soo dhawow!
Waxaan u maleynayaa inay tahay go'aankii ugu xumaa ee ay gaaraan, haddii firefox uusan sifiican uga shaqeyn daaqadaha 64-bit, waa inay ugu yaraan qasbaan midka 32-bit ah, ama ugu yeeraan Firefox64-bit, laakiin astaanta meel ha looga tago uma maleynayo iyaga ayaa ka faa’iidi doonta.
Dadku waxay aadayaan inay soo dejiyaan Firefox markay akhriyaan waterfox waxay doorbidi doonaan inay soo dejiyaan chrome ama ay ku dhagaan IE.
Ku jawaab k1000
Tani waxay dharbaaxo jaban ku tahay dadka isticmaala Windows, laakiin si cad ayey war fiican ugu tahay Linuxers. »
Ku farxi nasiib darrada dadka kale? Nidaamka aan ugu jeclahay waa debian, laakiin tusaale ahaan kumbuyuutarka aan qoro waxaan haystaa daaqado u dhigma iyo ciyaar ahaan. Taasna kuma raacsani.
Ku jawaab javichu
Maxaad ugu malaynaysaa inaan ku faraxsanahay? Kaliya waxaan qoray inay dhabarjab hoose ku tahay dadka isticmaala Windows .. Kee maaha?
Marka la eego meelaynta nidaam hawlgal, uma muuqato mid macquul ah in laga hor tago Windows. Laakiin waxay ila tahay aniga in la iska indhatirayo aasaaska, "taageerada xun waxay kaliya sabab u tahay tartanka."
Aniga aragtidayda, iyo iyada oo aan loo baahnayn in la galo mala-awaal, taasi waa sabab qasab ah.
Jawaab José Miguel
Hagaag, sida oo kale, hab super troll, hehehe, waan faraxsanahay, in kastoo aan ka warqabo inaysan fikrad fiican ahayn. Si kastaba ha noqotee, inkasta oo ragga Microshit ay caddeeyeen inay joojin doonaan horumarinta 32-bit Windows, uma maleynayo inay suurtagal tahay, ma sameyn doonaan.
Waad salaaman tahay, iga raali noqo laakiin kani waa war xun, waxaan arkay in warkan ay daabaceen dhowr boggag teknolojiyad ah, si kastaba ha noqotee waligeed ma jirin nooc 'rasmi ah' oo ah Firefox daaqadaha 64-bit, Waterfox waa koox samaysa nooc Nidaamka la yiri, laakiin wali waa nooc 'aan rasmi ahayn', dhanka kale asxaabteena ka socota mozilla waxay ku heleen tani waxoogaa qosol ah wayna muujiyeen iyagoo ka dhigaya xusuus maaddo ah http://mozillamemes.tumblr.com/ Had iyo jeer way wanaagsan tahay in la arko dhinaca wanaagsan ee waxyaabaha 😀
Tani way wanaagsan tahay:
Swiftfox waxay beddel fiican u ahayd Firefox, gaar ahaan tan markii loo qaabeeyey sida processor-ku u shaqeynayo, laakiin waxaan u maleynayaa in la joojiyey.
Markii ugu dambeysay ee la rakibo Debian waxaan rakibay swiftfox, waxay tixgeliyeen in sii joogitaanka nooca 3.6.3 ay ahayd tan ugu fiican, kumbuyuutarkuna si fiican ayuu u socday Seamonkey, wuxuu lasocday horumarkiisa, xiriirintii aan diray waxay sifiican ufiirinayaan oo ka qaadayaan hawadii hore. salaan
Yaree Isticmaalka Tumblerd CPU ee Xubuntu 12.10
Sida looga saaro xirmooyinka agoonta ee Arch